🥇 Ukwenza ingxelo ngeendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 327
Ividiyo yobalo lweendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo
Uku-odola ubalo lweendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo
Ukucwangciswa kweendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo yenziwa ngokweendlela ezivunyiweyo zemigangatho yamaxwebhu. Amaxwebhu ahlukile kwaye zininzi iindlela zawo, kufanele ukuba kuqatshelwe. Ngokwesiseko sabo, amangenelo ayenziwa kwiirejista zobalo. Kwishishini elikhulu langoku, la maxwebhu kunye neerejista, ubukhulu becala, zigcinwa zikwidijithali. Kwimbali yeendleko kwimveliso yemfuyo, kukho iindidi ezintathu eziphambili. Eyokuqala ibandakanya iindleko zeemveliso zemfuyo, iimveliso ezigqityiweyo zemfuyo, isivuno sesondlo, nezinto ezisetyenziswayo, ezisetyenziswa ngokupheleleyo kwinkqubo yemveliso. Iindleko ezinjalo zibandakanyiwe kwiinkqubo zocwangciso-mali ngokwamaxwebhu ahlukeneyo, nee-invoyisi. Eyesibini ibandakanya iindleko zezixhobo zomsebenzi, ezinje ngezixhobo zophicotho-zincwadi, izixhobo zobuchwephesha, ezibonisiweyo nakumaxwebhu obalo. Kwaye, ekugqibeleni, inkampani yenza ugcino-mali kunye nolawulo lweendleko zomsebenzi ngokwexesha lamaxesha, imivuzo, iiodolo ezahlukeneyo zomsebenzi, kunye nabasebenzi. Amaxwebhu okuphendula kunye nokulawulwa kwesivuno semveliso yemfuyo kubandakanya iijenali zokuvelisa ubisi, inzala yezilwanyana, isenzo sokudluliselwa kwezilwanyana kwelinye iqela lobudala, ukumka ngenxa yokuxhelwa okanye ukufa.
Kungenzeka ukuba kwiifama ezincinci zonke ezi rekhodi zigcinwa ngokulula ephepheni. Nangona kunjalo, kwizakhiwo ezikhulu zemfuyo, apho inani lemfuyo linamakhulu ezilwanyana, imigca yokusenga nokusasazwa kokutya, ukwenziwa kwezinto ezingafunekiyo, kunye nokuveliswa kwenyama kunye neemveliso zobisi kusetyenziswa, inkqubo yolawulo lwekhompyuter ibalulekile ekuhambeni okungaphazamiseki.
Isoftware ye-USU yimveliso eyahlukileyo ehlangabezana nazo zonke iimfuno zenkqubo yokunikwa kwengxelo yemveliso efanelekileyo. Amashishini emfuyo abuphi na ubungakanani kunye nobungcali, njengokufuya iifektri, amafemu amancinci, ukutyeba kweefama, izakhiwo ezinkulu zemveliso, njl njl. Ukwenza ingxelo ngeendleko kunye nokuveliswa kweemveliso zemfuyo kungagcinwa zombini ngokwahlukeneyo kwiyunithi nganye, njengendawo yokulinga, umhlambi, umgca wemveliso, njl.njl. Ujongano lomsebenzisi lweSoftware yeUSU icwangciswe kakuhle kwaye ayibangeli bunzima kwinkqubo yokuyiqonda. Iisampulu kunye neetemplate zamaxwebhu enzelwe ukubalwa kweendleko zemveliso kunye nokuveliswa kweemveliso ezigqityiweyo, iifom zobalo, kunye neetafile zaphuhliswa ngabaqulunqi abaziingcali.
Ukucwangciswa kweespredishithi kukuvumela ukuba wenze uqikelelo lweendleko kuhlobo ngalunye lwemveliso, lubalwe ngokuzenzekelayo kwimeko yotshintsho kumaxabiso ezinto ezisetyenzisiweyo, iimveliso ezigqityiweyo, njl. Njl. iingxelo kwistokhwe zokugcina, njl. njl. ziqokelelwe kwindawo enye yokugcina iinkcukacha. Usebenzisa ulwazi oluqokelelweyo lweenkcukacha manani, iingcali zenkampani zinako ukubala amaxabiso okusetyenziswa kwezinto ezingafunekiyo, ukutya, iimveliso ezigqityiweyo, ibhalansi yesitokhwe, ukucwangcisa umsebenzi wenkonzo yokubonelela kunye nemigca yemveliso. Idatha yesivuno ikwasetyenziselwa ukuphuhlisa kunye nokulungisa izicwangciso zemveliso, ukudibanisa iiodolo kunye nokuzisa kubathengi, njl.njl. Utshintsho lwengeniso kunye nenkcitho kwisithuba esinikiweyo, njl.
Isoftware ye-USU ibonelela ngezinto ezenzekelayo zemihla ngemihla kunye nokwenza ingxelo kwinkampani yezilwanyana, ukwenziwa kweendleko, kunye nokuncitshiswa kweendleko zokusebenza ezichaphazela amaxabiso endleko, inyusa inzuzo yeshishini lilonke. Ukubalwa kweendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo ngaphakathi kwesakhelo seSoftware ye-USU yenziwa ngokweefom zamaxwebhu avunyiweyo kushishino kwaye ngokungqinelana nemithetho yobalo. Inkqubo ihlangabezana nazo zonke iimfuno zomthetho olawula ukufuywa kwezilwanyana, kunye nemigangatho yeIT yangoku.
Useto lwenziwa kuthathelwa ingqalelo izinto ezithile zomthengi, imigaqo yangaphakathi kunye nemigaqo yeshishini. Iindleko eziphindaphindwayo ziyaxelwa kwaye ziposelwe kwizinto zobalo ngokuzenzekelayo. Imveliso egqityiweyo irekhodwa mihla le ngokwamaxwebhu aphambili. Inani leendawo zolawulo apho inkqubo irekhoda khona iindleko kunye nemveliso yeemveliso zemfuyo engachaphazeli ukusebenza kakuhle kwenkqubo.
Uqikelelo lweendleko oluzenzekelayo lubekelwe imveliso nganye. Kwimeko yotshintsho kwiindleko zezinto ezisetyenziswayo, iimveliso ezigqityiweyo, ukutya, njl.njl. Ifom eyakhelwe-ngaphakathi ibala indleko zemveliso ekuphumeni kwiindawo zokuvelisa. Ii-odolo zemveliso yemfuyo yasefama zigcinwa kwindawo yogcino lwedatha enye.
Ukusebenza kwendawo yokugcina indawo kulungiselelwe ngenxa yokudityaniswa kwezixhobo ezahlukeneyo zobuchwephesha, ezinje ngeskena sebhakhowudi, isikali sekhompyuter, iiterminal zokuqokelelwa kwedatha, njl. iindleko kunye nomonakalo ovela kwimpahla ephelelwe lixesha, ukulayishwa kweengxelo kwiibhalansi zangoku zawo nawuphi na umhla onikiweyo. Ukuzenzekelayo kweenkqubo zeshishini kunye nogcino-zincwadi kukuvumela ukuba ucwangcise ngokufanelekileyo umsebenzi wonikezelo kunye nenkonzo yokuvelisa, ukumisela amaxabiso okusetyenziswa kwezinto ezingafunekiyo, ukutya, kunye nezinto, ukuhlela iiodolo kunye nokuphuhlisa iindlela ezifanelekileyo zothutho xa iimveliso zinikezelwa kubathengi.
Ukuqulunqwa nokuprintwa kwamaxwebhu asemgangathweni, amaxabiso endleko, iijenali zokuphuma, iifom zoku-odola, ii-invoyisi, njl.njl. Ishedyuli eyakhelweyo inikezela ukubanakho kweeparameter zenkqubo kunye nemigqaliselo yokulungiselela iingxelo zohlalutyo ukuseta ukuphindaphinda kwesipele, njl.njl. ngaphandle kweendleko zangoku, njl.